Revolut - Better than your bank 5.29 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 5.29 လြန္ခဲ့ေသာ 8 လက
Application မ်ား ေငြေရးေၾကးေရး Revolut - Better than your bank
Revolut - Better than your bank ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
တော်လှန်ရေးကြီးဘဏ်များအနေနဲ့အခြားရွေးချယ်စရာဖြစ်ပါတယ်။ ဘဏ်တွေမတူဘဲ, ငါတို့သညျလူသားတို့ကဲ့သို့အကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်မပြောတတ်, ငါတို့က hidden အခကြေးငွေ add ကြဘူးပါတယ်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့ပြုပါအရာအားလုံးကို၏စိတ်နှလုံးမှာနည်းပညာကိုထားတော်မူ၏။
စဉ်းစားပါ built-in ဘတ်ဂျက်လက်ငင်းအသုံးစရိတ်ဆိုင်ရာအသိပေးချက်များ, cryptocurrencies ဝယ်ယူရောင်းချခြင်းနှင့်စစ်မှန်သောငွေလဲနှုန်းနှင့်အတူပြည်ပမှာပိုက်ဆံဖြုန်းနဲ့ပေးပို့ဖို့လွယ်ကူသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ လက်ျာဘက်, တော်တော်လေးသပ်သပ်ရပ်ရပ်?
ပဲမိနစ်အနည်းငယ်အတွက်ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူ app တစ်ခု-based အကောင့်ကိုဖွင့်ပြီးသူတို့ရဲ့ပိုက်ဆံစီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်ထိန်းချုပ်မယ့်အခြေခံကျကျပိုကောင်းလမ်းကြုံနေရသူပေါင်းသန်းသုံးကျော်ကလူ join ။
Revolut - Better than your bank အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Revolut - Better than your bank အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Revolut - Better than your bank အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Revolut - Better than your bank အား အခ်က္ျပပါ
apps-me စတိုး 53.8k 16.48M
Revolut - Better than your bank ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Revolut - Better than your bank အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 5.29
ထုတ်လုပ်သူ Revolut Technologies
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ https://www.revolut.com/privacy
App Name: Revolut - Better than your bank
Release date: 2018-12-27 02:52:06
လက်မှတ် SHA1: BB:92:16:C6:90:E2:EC:5C:F9:FE:F6:E4:D0:2E:7B:40:ED:15:91:43
Revolut - Better than your bank APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ